भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै – Rajdhani Daily
आइतवार १ पौष, २०७५ (Sunday, 16th December 2018)
१ पौष, २०७५ (16 December 2018)
जिल्ला अस्पतालमा दैनिक २ सयभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी
सिन्धुली, २५ साउन
वर्षाको समयमा जिल्लामा भाइरल ज्वरोका बिरामी अत्यधिक मात्रामा बढेको जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीले जनाएको छ । प्रतिदिन अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमध्ये झन्डै ९८ प्रतिबत बिरामीमा भाइरल ज्वरो रहेको जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट कल्याण कुमार बस्नेतले बताए ।
गाउँघरमा ज्वरो आउना साथ आफूखुसी औषधि सेवन गर्ने गरेका कारण गम्भीर अवस्थामा बिरामी भएपछि मात्र अस्पताल आउने गरेको डा. बस्नेतले बताए । उनले गाउँघरमा अवैध रूपमा खुलेका औषधि पसलले बिरामीलाई सुरुमै फ्लेक्सन दिने गर्दा त्यसले बाहिर ज्वरो नदेखिने र भित्रभित्रै रोगले सिथिल बनाउने बताउँदै उनले भने, ‘पछि ठूलो मात्रामा धनराशि खर्च गरेर उपचार गर्दा समेत कति बिरामीको उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा बिरामी पुग्न सक्छ ।’
फ्लेक्सन ज्वरोको बिरामीलाई दिने औषधि होइन, तर गाउँका चियापसल किराना पसल आदिमा पनि खुला रूपमा औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको बताउँदै त्यसले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पार्ने गरेको उनले बताए ।
सिन्धुली जिल्ला अस्पताल दुई वर्षअघि १५ शøयाबाट ५१ शयामा स्तरवृद्धि भएपछि अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य बढेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा सेवा दिँदै आएको स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुमित्रा गौतमका अनुसार हाल हरेक दिन बिरामीको संख्या ३ सयभन्दा माथि हुने गरेको छ ।
ज्वरो आएका बखत बिरामीलाई सिधै फ्लेक्सन चलाउँदा बिरामीको रगत विषाक्त भई रामी गम्भीर हुने गरेको डा. बस्नेतले बताए । यसले बिरामीको रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ । यस्ता खालका बिरामी भएर अस्पताल आएकालाई बाहिर पठाउँदा दुई लाखसम्म खर्च भएको भन्दै डा. बस्नेतले यस्तो खालको बिरामी आएमा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बेगर सिटामोल मात्र खान सकिने बताए । ‘अन्य औषधि लिनुपर्दा चिकित्सकको परामर्श बेगर लिन हुन्न,’ उनले भने ।
अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि सरकारले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको भए पनि मेडिकल अधिकृतहरू नपठाएको गुनासो बस्नेतले गरे । सिन्धुली जिल्ला अस्पतालमा १० जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भएकोमा सबै दरबन्दी खाली रहेको उनले बताए ।
जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीले बिरामी तथा सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखी गत आइतबारबाट फार्मेसी सेवासमेत सुरु गरेको छ । अस्पतालभित्र फार्मेसी सेवा सुरु भएपछि बिरामीले किनेको औषधीमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
Tags: Seasonal FeverViral FViral Fever
रित्तै हात फर्किन विवश छन् सुत्केरी
बाजुरा। बूढीनन्दा नगरपालिका–१० पाण्डुसैनकी दुर्गा रावलले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा पुगेर छोरीलाई जन्म दिइन् । उनको यो दोस्रो बच्चा हो । पहिलो बच्चा हुँदा उनले चारपटक गर्भ जाँच गराएबापत १÷१ सय...
अब अनौपचारिक शिक्षा
काठमाडौं। बिचैमा पढाइ छोडेका वा उमेर पुगेर विद्यालय जान नसकेकाले अब अनौपचारिक शिक्षामार्फत पढ्ने धोको पूरा गर्न पाउने भएका छन् । शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले अन्तिम रूप लिएपछि अनौपचारिक शिक्...
काठमाडौं। बिचैमा पढाइ छोडेका वा उमेर पुगेर विद्यालय जान नसकेकाले
२४औं स्थापना दिवस, धुलोमुक्त क...
गाडी किन्ने पैसाले एम्बुलेन्स...
दिल्लीमा भेटियो ३३ किलो सुन, द...
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, ओली र...
लोकसेवा तत्काल नखुल्ने, कर्मचारी समायोजनपछि बल्ल विज्ञापन (21,886)
वैज्ञानिक भन्छन् : नेपालमा फेरी आठ रेक्टरको भूकम्प… (13,627)
समायोजन सफ्टवेयरले गर्छ, कसैको सोर्सफोर्स चल्दैन (13,375)
१७ सहसचिवसहित १८९ कर्मचारीको सरुवा स्थानीय तहमा मात्रै १११ (13,137)
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी रहेको लोकसेवाको ठहर (10,577)
काङ्ग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्र शुरु
राजस्व सचिव फेरिए, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव घिमिरे नयाँ राजस्व सचिव
२४औं स्थापना दिवस, धुलोमुक्त काठमाडौं मेयरको प्रतिबद्धता
पाँच केन्द्रका यन्त्रले देखाएनन् प्रदूषण मात्रा
दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य गरेको स्टालिनग्राद युद्ध
दोस्रो विश्वयुद्ध रोक्ने स्टालिन ग्रादको ऐतिहासिक युद्ध आफैमा आश्
संसारबारेका यी रोचक तथ्य तपाईल...
नातिकाजी स्मृति अभिनन्दन राष्ट्रकविलाई
काठमाडौं। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले नातिकाजीको संगत ग
स्वस्तिमाको टेम्पो चालक चरित्र
काठमाडौं। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले टेम्पो चाल